महानगर बन्द गरेर भरतपुरकी मेयर सुटुक्क माइत !::The Leader Of Nepal
महानगर बन्द गरेर भरतपुरकी मेयर सुटुक्क माइत !
चितवन – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै साउन ३० गते रातिदेखि भरतपुर महानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरियो । महानगरभित्र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या सय पुग्नै लाग्दा मेयर रेणु दाहालकै अग्रसरतामा निषेधाज्ञा जारी गरियो । उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार
नै महानगर अहिले सुनसान छ । भदौ २ गते महानगरले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्‍याे, ‘हरितालिका तीजको शुभकामना’ व्यक्त गरेर । मेयर दाहालले नै निकालेको विज्ञप्तिमा ‘नगरवासीलाई घरघरमा बसेर मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न, भौतिक दुरी कायम गरी तीज पर्व मनाउन विनम्र अनुरोध गर्दछु’ भनिएको छ ।
महानगरको सूचनाका आधारमा नगरवासी आ–आफ्नै घरमा नै तीज मनाउने तयारीमा छन् । आक्कल–झुक्कल माइत हिँड्नेलाई प्रहरीले जरिबाना तिराउने गरेकाे छ । चितवन प्रहरीले सडकमा हिँड्नेबाट पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना असुल गरिसकेकाे छ ।
तर मेयर दाहाल आफू भने सुटुक्क माइत पुग्नुभएको छ । नागरिकलाई घरमै बस्न उर्दी जारी गरेर आफू भने सुटुक्क माइत पुगेको भन्दै महानगरभित्र उहाँको आलोचना भइरहेको छ । उहाँ माइत पुगेर ‘तीज विशेष छोरीहरुको साथ’ भन्दै फेसबुकमा तस्बिर आफैले पोस्ट गरेपछि कमेन्टमा समेत आलोचना भएको छ । भरतपुर महानगरमा कोरोनाका बिरामी राख्ने ठाउँ छैन । सङ्क्रमण बढ्दो छ । एकातिर निषेधाज्ञाले नागरिक घरमै उकुसमुकुस छन् । भरतपुर अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितका लागि छुट्याइएको बेड भरिएर कहाँ राख्ने भन्ने पिरलो छ । महानगरमै बसेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने समयमा प्रमुख दाहाल तीजको रमाइलो मान्न माइत पुग्नुभएको छ र सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गर्नुभएको छ ।
महानगरभित्र लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण पैदल हिँड्ने समेत जरिबाना तिर्न बाध्य छन् । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएका कारण त्रास बढ्दै गएको छ । ४ गते काठमाण्डौ जानुभएको मेयर दाहाल ७ गते मात्र चितवन फर्कने कार्यक्रम छ । मेयर काठमाण्डौ पुगेको जानकारी दिँदै महानगरले उहाँको अनुपस्थितिमा पनि महत्त्वपूर्ण काम नरोकिने बताएको छ । आफै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएकी दाहाल पीसीआर परीक्षण गरेर माइती (काठमाण्डौ) पुग्नुभएको हो ।
मेयर दाहालले बिहीबार दिउँसो फेसबुकमा पारिवारिक फोटो पोस्ट गरेपछि त्यसमा कमेन्ट गर्ने कतिपयले महानगरमा निषेधाज्ञा गरेर आफू अन्त हिँडेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सात वटा पालिका रहेको चितवनमा माडी नगरपालिका बाहेक छ वटा पालिकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले अरु पाँच पालिकाभन्दा अगाडि नै महानगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको थियो ।